Thwebula Reaper 5.29 – Vessoft
Reaper – a software ukudala bese uhlela umculo ngokusekelwa for ubuchwepheshe ezahlukene. Isofthiwe ikuvumela ukuba alobe, hlela, ukwakha nokulungisa amathrekhi multi-channel audio. Reaper isekela takhiwo ehlukahlukene ukudlala noma ukurekhoda amafayela alalelwayo kwenza ukusebenzisa imiphumela eminingi akhethekile bebe kwemaphutsa. Isofthiwe kwenza ukulawula ezingeni ukuphakama kwezwi, ushintshe imingcele ithrekhi futhi amqhubele buyisela emumva multilevel noma ukuphinda izenzo asikhiphile. Reaper kwenza ukuze wenze lwangaphandle software esebenzisa izikhumba ezahlukene.
Ukwakha i audio nge support for ubuchwepheshe ezahlukene
The Amathuluzi ukusebenza nge amathrekhi audio
Ukusekela for ezenziwe
Amazwana on Reaper:
Reaper Ahlobene software:
English, Afrikaans, Українська, Français... GoldWave 6.24
Mozilla Firefox 50.0.2 futhi 51.0b6 rc 1